साहित्य संवाद विथ राजेन्द्र थापा - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
साहित्य संवाद विथ राजेन्द्र थापा | Saturdayकलम | Kavyalaya
साहित्य संवाद विथ राजेन्द्र थापा
by श्रीजु सरल July 20, 2019
१. शुक्रबार “शकुनी” विमोचन भयो, यस उपन्यासबारे के भन्नुहुन्छ ?
⇒ ५६८८ वर्ष अघि महाभारत युद्धमा सभ्यता र जन सिनित्तै भए । अर्को तिन हजार वर्षको इतिहास अज्ञात छ । करिब २७/२८०० वर्ष अघी देखिको मात्र कुरा थाहा छ । र महाभारतको कथा पनि तिन हजार वर्षपछी सुनिन आउँदा कृष्णलाई देवअवतार र पाण्डवलाई धर्मयुद्धका पक्षका देखाई हाम्रो मस्तिष्कमा आस्थाको एक पक्ष बनाइएको छ । तर शकुनीमा मैले कौरवन पक्षबाट कथा पुनःलेखन गरेको छु । हरेक दैवी या मानवीय घटनालाई प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक रुपले चिरफार गरेको छु । गहन अनुसन्धान र मिहिन मनोवैज्ञानिक तहमा पुगेको छु । यो पक्षबाट भारतमा बारबार छलफल उठे पनि आख्यानका रुपमा लेखिएका छैनन् । यश हिसाबले महाभारत विषयक यो दृष्टिकोण को आख्यान विश्वमै पहिलो हुनसक्छ । अब हिन्दीमा शुरु गरेको छु ।
२. खेलौना, द्रौपदी, बदलेको कथा, फिर्ता चाहियो । नारी मनोविज्ञान र सामाजिक विषयवस्तुमाथि चलिरहेको कलमले यसपटक ऐतिहासिक यथार्थपरक उपन्यास कसरी लेख्न पुग्यो ?
⇒ महाभारतका सबैभन्दा पिडित पक्ष नै नारीहरु हुन् । तिनले कहिले केही पाएनन् । खाली गुमाए । गान्धारीले पट्टी बाँधेर, कुन्तीले कहिले वन र कहिले कौरव दरबारमा कैदी सरह बसेर तथा द्रौपदीले पाँच पतिको एकल पत्नीका रुपमा जुवाको बस्तु, चिरहरण, वनवास, सकल सन्तानको मृत्यु आदी भोगे । तसर्थ विषय समान नै होला । तर पनि शकुनीको क्यानभास असाधारण विशाल छ । भारत र नेपालमा नि शकुनी र दुर्योधन बाहेक अन्य सबै विषयको किताब छन् । र मैले भने ठिक विपरीत ढोकाबाट छिर्ने प्रयत्न गरेँ शकुनी रचना मार्फत । सामाग्री रेडिमेड नभएकोले सोच्नै गार्हो थियो ।
३. पोहोर साल खुशी फाट्यो, पर लैजाउ फूलहरु । तपाईँका गीतहरू सुन्दै म र म जस्ता कैँयौ हुर्किएका छौँ । उसो त कविता पनि उत्तिकै सशक्त लेख्नुहुन्छ, साहित्यको सुरुवात कहाँबाट गर्नुभयो ?
⇒ आठ/नौ वर्षको उमेरदेखि कविता लेख्न थालियो । ११/१२ वर्षमा नाटक लेखी साथी-साथी बिच मन्चन भयो । १७/१८ वर्षमा गीत रेकर्ड गरेँ । २३ वर्षमा उपन्यास लेखन आदि । ८/९ वर्षको कलिलो समयदेखि हिन्दी गद्य-पद्य अत्याधिक पढेकोले मस्तिष्कले शायद हर विधाको लागि फरम्याटिङ् गरेकोले गर्दा हुनसक्छ मलाई जे नि लेख्न सहज हुने भएको । साहित्य रचनामा जे जति लेखे पनि आफूलाई मन नखाएसम्म अरुलाई मन खाँदैन भन्ने सोच्छु म । मूल गुण यही हो प्रकाशन गर्ने विषयमा ।
४. विषयवस्तु खोज्नुहुन्छ कि भेटिन आइपुग्छन् ?
⇒ गीत, कविता जस्तो शब्द हतियारको भरमा बन्दैन कथा उपन्यास, नाटक । कथा घटना चाहिन्छ । र ती जति पनि छन् । लेख्न खोजि गर्छन आख्यानकारहरु । किनभने आख्यानकारको काम या लेखन या सकसक नै आख्यानबाटै पुर्ती हुन्छ । मेरा लागि आख्यान अनिवार्य सकसक भएन गीतजस्तो । गीत मेरो मूल सकसक भएकोले तेसमा भने खोजी रहन्छु । तर आख्यान विशेष गरी उपन्यासमा भने अचानक फलानो विषयमा लेख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएपछि लेख्न थाल्छु । पहिले प्लट पात्र घटना उत्कर्ष केही सोच्दिन । लेख्दै जाँदा नयाँ प्लट, पात्र, घटना, आदी थपिन्छ । कथा विषयक भने पत्रिकाहरुमा देखिने कुनै घटना पढ्दा त्सयमा युनिक या नयाँ स्कोप छ भने कथा लेख्ने सोच बन्छ । तर बर्षौँ पछी या तत्कालै जे नि हुन सक्छ । तर घटनामा पात्र र मोडहरु तथा साइड प्लटहरु भने लेखिँदै जाने हुन्छ ।
६. एउटा साहित्यकारले राजनीति बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?
⇒ साहित्यकार पनि यही समाजको व्यक्ती भएकोले उ राजनीतिज्ञ या समाजसेवी, वैज्ञानिक, व्यापारी जो पनि हुन सक्छ । तर उसको साहित्य भने राजनीति बाट दूषित हुनुहुन्न ।
७. साहित्यमा राजनीति हुन थालेको गुनासो आजभोलि धेरै सुनिन्छ, तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ ?
⇒ साहित्य यस्तो बस या गाडी हो जस्मा जे सुकैलाई यात्रा गराउन सकिन्छ तर बस स्वयम् यात्रु भने बन्नु हुन्न । अर्थात राजनितिले साहित्यलाई साधनको रुपमा जनतासामु पुग्न उपयोग गर्न सक्छ । तर साहित्य स्वयम् राजनीति होइन । साहित्य स्वयमले राजनीति गर्दैन ।
Image Credit: Rajendra Thapa